Fa maninona i Nintendo no nianjera taorian'ny fanambarana ny lalao finday Miitomo-ny? | Androidsis
Cristina Torres sary placeholder | | Lalao Android
Nefainona no tsy mety amin'ny Nintendo? Izany angamba no iray amin'ireo fanontaniana izay mbola tsy voavaly mandraka androany. Nahita ny toerana voalohany nisy azy io ny orinasa tamin'ny vanim-potoana nanorenany ny lalao video ary nanjary lavenona ny zavatra tianay mpanjifa. Tsy azo lavina fa mafy ny fifaninanana, fa ny tena izy dia nilentika ny tenany ilay orinasa. Ny hetsika lehibe farany natao hanamafisana io tsy fahombiazana io izay nitetezana azy nandritra ny taona maro dia ny "tsy misy doka" amin'ny lalao voalohany natao ho an'ireo sehatra finday: Miitomo.
Ny zava-misy dia samy ny daholobe sy ny mpampiasa vola mihitsy no efa nanome fotoana matanjaka ho an'ny orinasa, manantena fa ireo nahavita nanetsika taranaka vitsivitsy niaraka tamin'io Club Nintendo izay efa tsy miasa intsony io dia hanome aingam-panahy antsika indray ary haneho amintsika ny tsara indrindra fantatr'izy ireo manome ... Tsia. Tsy te handroso fotsiny i Nintendo. Te hifantoka amin'ny fahafantaran'izy ireo izay tadiavin'ny besinimaro izy ireo na dia mandà fotsiny aza ireo tolo-kevitra rehetra ireo, etsy ankilany, tsy mitombina. Tsotra lavitra noho ny nandrasana ny Simple Miitomo, ary efa ela niandrasana ny Nintendo hiditra tanteraka amin'ny tontolon'ny finday.
Lalao milionera mifototra amin'ny Nintendo
Azo inoana fa ny mpitantana ny Nintendo dia mifantoka loatra amin'ny bokotra kibony mba hahatsapanao izay tena zava-mitranga ao amin'ny orinasa, saingy handehandeha amin'ny Google Play fotsiny vao tena hahatsapa fa ny fandresena dia ireo safidy izay misy ifandraisany betsaka amin'ireo kilasiny. Inona koa, tsy tadidiko akory ilay fandrahonana tamin'ny endrika fitoriana izay tonga tampoka tamin'ilay lasa mpitapitrisa olona iray niaraka tamin'ireo vorona manidina izay nitovy endrika tamin'ny fantsona kilalao an'ny lalao Nintendo.
Saingy, raha mazava ny tsena momba izay tadiaviny ary azo jerena amin'ny maso mitanjaka, maninona tsy Nintendo no manao azy fotsiny? Saika matetika, rehefa nisy orinasa efa an-taonany maro tao amin'io sehatra io dia sarotra ho azy ireo ny mitsambikina. Ary ny fanekena fa ny konsolany dia tsy ampy hanararaotra feno ny lalao video, izay tadiavin'ny besinimaro, dia tsy ny hiaiky fahombiazana iray fotsiny fa roa. Ny orinasa dia nanandrana nanodina ny tsena nandritra ny taona vitsivitsy nefa tsy nahomby. Inona koa, ny mifanohitra amin'izay no nataon'izy ireo, ny fampihenana ny tombom-barotra sy ny fatiantoka amina ampahefatra maro. Sarany lavitra kokoa ny mamantatra ny lesoka ara-potoana noho ny misisika amin'ny fijoroana mafy orina izay hiteraka fatiantoka ara-teknika.
Izaho manokana dia mieritreritra izany na ho ela na ho haingana Nintendo dia hiafara amin'ny fanaovana ny fitsambikinana amin'ny tontolo Android ary afaka milalao ny kilalao amin'ny alàlan'ny Google Play izahay. Na izany aza, mety ho tara loatra ny hijinja ireo tombontsoa rehetra very ary mety tsy hisy ny fiafarany mahafaly araka ny nandrasana. Na izany na tsy izany, ny fatiantoka an'i Nintendo taorian'ny nanambarana an'io anaram-boninahitra nahatratra ny fientanam-po be io, Miitomo, ary navela irery tamin'ny mety hisy, dia takatra tanteraka. Ny fahadisoam-panantenana dia tsy fofona fotsiny eo amin'ny tontolon'ny mpampiasa vola, fa an'ny an'ny mpampiasa ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Fa maninona i Nintendo no nianjera taorian'ny fanambarana ny lalao finday Miitomo-ny?
Tsy manohitra ny Nintendo aho mamoaka lalao finday fa raha nanokan-tena ho amin'izany fotsiny izy ireo, dia bankirompitra tanteraka izany, ny tombony azon'ny Nintendo dia avy amin'ny konsolany raha toa ka kilalao finday fotsiny no atokana ho azy dia hirodana ho lasa orinasa lalao video bebe kokoa. Tsy fantatro izay eritreritry ny olona amin'ny lalao havoakan'i Nintendo, ny clade dia hoe ho anisan'ity kilasy ity izy ireo, hamoaka Mario azo antoka fa tsy misy na inona na inona eto an-tany hafa, tsy misy na inona na inona afaka mamaha ny lalao konsoly ary manao ny marina. tsara fa manao tsara kokoa noho izy ireo Manimba ny fanaovana lalao tena izy ho an'ny console toy izay hidina any anaty lavaka manao lalao mobile crappy.
Ariel aguilar dia hoy izy:
Heveriko ho toy ilay etsy ambony: v
Valiny tamin'i Ariel Aguilar
360 Security, antivirus izay manatsara ny rafitra